आफुभन्दा १६ वर्ष कान्छासँग प्रेम सम्बन्धमा
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । सुष्मिता सेन र रोहमान शालसँग प्रेम सम्बन्धमा भएको लामो समय भयो । दुबैले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो सम्बन्ध स्वीकारेका छन्। ११ जनासँग डेट गरिसकेकी सुष्मिता अहिले
आँचल शर्मासँग प्रेम सम्बन्धकाे बारेमा पलले लेखे यस्तो स्टाटस
काठमाडौं । नायिका आँचल शर्मासँग प्रेम सम्बन्धमा रहेको भनिएका चर्चित नायक पल शाहले आफुहरु प्रेममा नरहेको दाबी गरेका छन् । आँचलले डा. उदिप श्रेष्ठ आफ्नो प्रेमी भएको सार्वजनिक गरेपछि पलको
काठमाडौं । के हामी विभिन्न सूक्ष्म तार र हार्डवेयर मिलेर बनेको कम्प्युटर जस्तै हाड र नसा मिलेर बनेको यन्त्र हौं ? कम्प्युटरको सफ्टवेयर परिवर्तन गरेजस्तै सञ्चालन भइरहेका मस्तिष्कका तन्तुलाई परिवर्तन
जान्नुहोस् कस्ता गुण भएका महिला भाग्यमानी हुन्छन्
संसारमा महिलालाइ देविको अवताको रूपमा लिने गरिन्छ। महिलालाइ नराम्रो नजरले समेत हेर्न नहुने विस्वास रहेको छ । मिहलालाइ एक महत्वपुर्ण वस्तुको रूपमा लिने पनि गरिन्छ। शिव पुराणमा महिलाहरूमा हुनपर्ने यस्ता
बाँसको तामाको तपाईं अचार, तरकारी वा सुप, के खानुहुन्छ ? जसरी खाए पनि यो स्वादिष्ट त हुन्छ नै यसले मानव स्वास्थ्यमा समेत फाइदा पुर्याउँछ । मो सेबनले मुटुको लागी राम्रो
भुटान कसरी बन्यो संसारकै खुशी र शान्त देश ?
भुटानका जनता प्रकृतिलाई भगवान मान्छन् । यहाँका थुप्रै पुस्ताका मानिसहरु अहिले पनि एक साथ एकै घरमा प्रकृति प्रति चिन्ता र चासो राख्दै बस्ने गर्छन् ।’ विश्वका सबै भन्दा बढी प्रदुषित
बिहान उठेर के गर्दा भाग्य चम्किन्छ ?
तपाई बिहान उठेर केके गर्नुहुन्छ ? यस्ता कामहरु गर्नुभएको छैन भने अब देखि बिहान बिहान यस्ता कार्यहरु गर्नुहोस् । तपाईको घरमा कहिल्यै पैसाको कमी हुनेछैन । भाग्य चम्किने छ ।
विवाहपछि पनि भाग्य चम्किएको छैन भने यस्ता उपाय छन् जसले मानिसको भाग्य चम्किन्छ
भनिन्छ कि विवाह पछि कुनै पनि व्यक्तिको भाग्यमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ । हिन्दू शास्त्रमा पत्नीलाई पतिको अर्धाङ्गनी मानिएको छ । पत्नीको भाग्यको पतिको भाग्यमा पनि निकै ठूलो प्रभाव परेको
७३ वर्षीया महिलाले जुम्ल्याहा सन्तान जन्माइन्
एजेन्सी, दक्षिण भारतको आन्ध्र प्रदेशमा ७३ वर्षीया महिलाले जुम्ल्याहा सन्तान जन्माएकी छन्। मंगयम्मा यरामती नामकी महिलाले ‘आइभिएफ’ प्रविधिका माध्यमबाट बिहीबार जुम्ल्याहा छोरी जन्माएकी बिबिसीले उल्लेख गरेको छ। आइभिएफ प्रविधिमा शुक्रकिट
नादिया म्याटिएभ्स्कायीया बेलारुसकी चित्रकार हुन् । उनले आफ्नै प्रयासले चित्रकला सिकेकी हुन् । अहिले उनी आफ्नो चित्रकलाको अनौठोशैलीले चर्चामा छिन् । यी युवती चित्र बनाउनको लागि उनको स्तन प्रयोग गर्छिन्
कुखुरा कराएको भन्दै कुखुराविरुद्ध मुद्दा
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । तपाइले कुखुरालाई मुद्दा परेको सुन्नुभएको छ? तर फ्रान्समा कुखुरा विरुद्ध मुद्दा परेको छ । फ्रान्सको एक अदालतले माउरिस नामक कुखुरोलाई मनलाग्दी कराउन दिने पक्षमा फैसला
लिपिस्टिक यसरी लगाउँदा ओठ सुन्दर देखिन्छ
काठमाडौं । हरेक महिलाले लिपिस्टिक लगाउन रुचाउछन् । महिलाको सुन्दरता लिपिस्टिकमा विषेश फरकपना देख्न पाइन्छ । तर धेरैलाई लगाउने तरीका थाहा नहुन सक्छ । लिपिस्टिकलाई बोल्ड लुक्स दिन लिपिस्टिक लगाएपछि
काठमाडौं । हाम्रो देशको विवाह जातजाती धर्मसस्कृति अनुसार फरकफरक छ । विवाह सबै देशमा गरिन्छ । विधिहरु फरक छन । विश्वमा थुप्रै देशहरू छन्, जहाँको अनौठा कानुन सुनेर मानिसहरू चकित
एजेन्सी, अस्ट्रेलियामा कुखुराको भालेको आक्रमणबाट एक वृद्धा महिलाको मृत्यु भएको छ। आफैंले पालेको कुखुराको आक्रमणबाट वृद्धाको मृत्यु भएको अस्ट्रेलियाका प्रहरीले जनाएका छन्। दक्षिण अस्ट्रेलियास्थित आफ्नै घर पछाडि ती महिलाको सानो
२७ वर्षदेखि श्रीमतीलाई काम गराउँदै आएका १ व्यक्तिले तिरे २ करोड बराबरको क्षतिपूर्ति
हालै अर्टेन्टिनामा भएको एक अनौठो घटना सार्वजनिक भएको छ । अर्टेन्टिनामा बसोबास गर्दै आइरहेका एक व्यक्तिले २७ वर्षदेखि आफ्नी श्रीमतीलाई काम गराउँदै आएको आरोपमा अदालतले उनलाई २ करोड रुपैयाँ बराबरको
पहिलो विकल्प फिजियोथेरापी
डा. प्रियंका घिमिरे फिजियो थेरापी भन्नाले विश्वविद्यालयबाट डिग्री हासिल गरेका दक्ष, कुशल र अनुभवी फिजियो डाक्टरद्वारा विनाअप्रेसन र विनाऔषधिको प्रयोगबाट रोगीलाई गरिने विनासाइड इफेक्ट स्वास्थ्य उपचारको विधि हो। यसको सम्बन्ध
अचम्मको देश जहाँका भेडा विद्यालय जान्छन् !
शिक्षा हासिल गर्न मानिस विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा भर्ना भएको त हामीले देखेकै छौ । तर एक युरोपेली मुलुकमा भने १५ वटा भेँडालाई स्कुलमा भर्ना गरिएको छ । सुन्दा अपत्यारिलो र
किन, महिलाहरु विवाहित पुरुषसँग विवाह गर्न मरिहत्ते गर्छन्
एजेन्सी । नेपालमा पुरुष भन्दा महिला धेरै छन । तर विश्वमा केही यस्ता राष्ट्रहरु छन् जहाँ महिलाकोको संख्या कम भएका कारण पुरुषहरु विवाह गर्न पाएका छैनन् । त्यस्तै विश्वमा यस्तो
टिकटकमा भुल्ने ११ कर्मचारीको जागिर चट्
सामाजिक सञ्जाल त्यस्ता वेभसाइट हुन् जसमा हामीले नँया साथि बनाउने, फोटाहरु आदान प्रदान गर्ने, गर्दछौँ । जस्तै, फेसबुक, ईन्स्टाग्राम, स्काईप आदि । त्यस्तै मध्ये एक हो टिकटक। अहिलेका युवा पुस्तामा
पुरुषको लिङ्ग जस्तै देखिने अनौठो सर्प
संसारमा हामीले नदेखेका विभिन्न प्रजातिका प्राणीहरु हुने गर्दछन् । यस्तै अनौठो उभयचर प्रजाति ब्राजिलमा फेला परेको छ । यो अनौठो प्राणी १८०० को उत्तरार्धमा ब्राजिलको वर्षावनमा पहिलो पटक पत्ता लागेको